Mareykanka oo wada Qorshe Halis ku ah Falastiin iyo Wiilka uu sodoga u yahay Trump oo…. | Salaan Media
Mareykanka oo wada Qorshe Halis ku ah Falastiin iyo Wiilka uu sodoga u yahay Trump oo….
June 25, 2018 | Published by: Hamse
Maamulka Falastiin ayaa sheegay inaysan aqbali doonin qorshe cusub oo uu Maraykanka ku sheegay inuu heshiis kama danbeys ah ku dhex dhigayo Israel iyo Falastiin.
Qorshahan oo ay xukuumada Trump ku sheegtay “Heshiiska Qarniga” ayaa waxaa garwadeen ka ah wiilka uu Madaxweynaha Maraykanka sodoga u yahay ee Jared Kushner oo isagu ah maalqabeen Yahuud ah oo horey u maalgeliyey dhul boobka ay kooxaha xagjirka Yuhuuda ka wadaan dhulka Falastiin.
Koox uu hogaaminayo Kushner ayaa todobaadkii tagay safaro ku marayey dalalka Carabta ee jaarka la ah Israel si uu uga dhaadhiciyo qorshaha ay doonayaan in lagu xaliyo dhulka ay isku heystaan Falastiiniyiinta iyo Israel.
Kushner iyo kooxdiisa oo kulamo la yeeshay maamulada Israel, Jordan, Masar, Sacuudiga & Qatar ayaan la kulmin maamulka Falastiiniyiinta oo horey u sheegay in Maraykanka uusan dhex dhexaad ka noqon karin arrimahooda, kadib go’aankii xukuumada Trump ku sheegtay in Magaalada Qudus ay tahay caasimada Israel.
Qorshahan laga soo diyaariyey Aqalka Cad ayaa ah mid si weyn ugu jeen jeera Israel, walow aan si rasmi ah loo shaacin qodobada uu ka kooban yahay, ayaa hadana qeybo kamid ah oo warbaahinta heshay ayaa waxaa kamid ah in Israel ay maamuleyso gebi ahaan “Amniga”, dhulka uu hada ka taliyo maamulka Falastiin ee [Daanta Galbeed ee Wabiga Urdun] halka Falastiiniyiinta ay maamulayaan Gaza.
Kooxda Kushner ayaa qorshaha ay soo diyaariyeen waxaa kamid ah in Tuulooyinka u dhaw magaalada Qudus laga sameeyo Caasimada Falastiin, isla markaana wadooyin u gaar ah loo sameeyo inay isku xiraan magaalooyinka Falastiin maamuli doonaan iyo goobaha lagu cibaadeysto ee ku yaal magaalada Qudus, sida Masjid Al Aqsa.
Si Falastiiniyiinta looga gado qorshahan ay ku dhuminayaan dhul horleh ayaa lagu sheegay in Maraykanka uu maalgelin doono dhismaha iyo horumarinta qaar kamid ah magaalooyinka ay degen yihiin Falastiiniyiinta.
Waxaa gebi ahaan meesha laga saaray in Qaxootiga reer Falastiin ee dhulkooda Israel ka baro kicisay dagaaladii hore inay dib ugu noqdaan dhulkooda, iyadoo aanba lasoo hadal qaadin xal u helida dhul boobka ay wadaan kooxaha Yuhuuda xagjirka ah oo kala jar jaray dhulka Falastiin ay dooneyso inuu mustaqbalka noqdo dalkooda.
Dhinaca kale xubno kamid ah maamulka Falastiin oo ka hadlay qorshahan Maraykanka uu wado ayaa sheegay inuusan noqon doonin mid u cuntama shacabka Falastiin, waxayna ku eedeeyeen in Maraykanka uu wado qorshe labaad oo ah in xukunka laga tuuro Madaxweyne Maxamuud Cabaas hadii uu aqbali waayo qorshaha ay doonayaan inay usoo bandhigaan.
Sacib Erekat oo kamid ah maamulka Falastiin ayaa sheegay in Maraykanka uu doonayo inuu Falastiin khasab uga dhigo inay aqbalaan inay dhulkooda ku wareejiyaan Israel, iyagoo ku bedalanaya lacago yar taasina aysan ahayn wax ay aqbali karaan. “…Maraykanka wuxuu hada sidoo kale wadaa inuu xilka ka tuuro Maxamuud Cabaas oo diiday qorshahan, si ay u fushaan qorshahan loogu xalaaleenayo Israel kala bar dhulka ay hada Falastiiniyiinta maamulaan…” ayuu yiri Sacib Erekat.